butterfly Staxx | Top Slot Site | Ucingo & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
butterfly Staxx kuyinto Slots phezulu umdlalo ngokusekelwe imilingo Fairytale isihloko izingadi, izimvemvane futhi izimbali ukuthi uqiniseka ukuthatha uvala nemvelo. Kukhona paylines amane kule umdlalo sisabalale itolitji emihlanu futhi imigqa ezintathu. I itolitji asethwe ngokumelene okwenza umfula ekusakazeni serene izintaba ensimini yase izinhlobo zezihlahla nezimbali emhlabeni. Kukhona umculo mesmerizing esasinikezwe umdlalo oyoqhubeka ingqondo nomzimba lathambisa zonke kanye. Wager kule game, kukhona umkhawulo ayimisa phakathi £ 0.20 futhi £ 400 spin ngamunye. Umdlalo idlaleke Mobiles, amathebulethi namakhompyutha edeskithophu.
Lokhu ngomlingo evumelanisiwe Slots phezulu umdlalo yasungulwa ngu NetEnt. Ziyakwazi namaphayona yekhasino Slots inthanethi nge engaphezu kwemibili anokuhlangenwe nakho kweminyaka eminingi. Baye wadala imidlalo esingaphezu kwekhulu ezahlukeneyo ezahlukene, ngasinye engavamile futhi izici ukusiza abadlali win ezinye imivuzo umxhwele.
kulesi Slots phezulu umdlalo, ungakwazi ukudlala izimpawu egqamile izimbali ezihlukahlukene kanye butterfly. Uvemvane i- elikhazimulayo phezulu ukukhokha uphawu nge 60 izikhathi ukubheja yakho. abomvu, pink mpungana ezimbili izimbali anemibala sikukhokhela 40x lapho ezinhlanu emazweni uhlobo kwi payline. J, A, K no Q sidlala amakhadi akhokhe ezigxotsheni kancane engezansi 20x ngamunye. Zonke onqobayo ezibhekwa lapho izimpawu avele kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla itolitji ku izikhundla okwalandela. Kukhona izimpawu ezimbili ibhonasi eziyokusiza ukuba unqobe kusukela izici sithuthukiswe. Bangabaholi izimpawu imbali nge imibala ehlukene amacembe kanye lavender ezinemibala imbali.
Ibhonasi Wild: Imbali ngemibala ehlukahlukene ezahlukene amacembe liwuphawu zasendle. Ushintsha zonke ezinye izimpawu yomdlalo ngaphandle kwalowo kubangela chitha.
Chitha Ibhonasi: Uphawu imbali lavender ezinemibala iyona chitha lokhu Slots phezulu umdlalo. It imiklomelo wena 5, 6 noma 7 imidlalo mahhala nge 3, 4 noma 5 uphawu lihlala. Phakathi osebenzisa free, uthola kuphela oluhlaza anemibala umfece izimpawu phezu itolitji. Bonke abami elikhazimulayo aguqule zibe egeleza izimvemvane bese beyikhipha kuze kwedlulele kwesokunxele itolitji. Zonke izimvemvane zanqwabelana ukunikela win inhlanganisela ezahlukene kanye nemivuzo ezinkulu ekupheleni zonke osebenzisa.
Nge inkulumo yakho ikhange futhi ihluzo emangalisa futhi ingqondo ohlabayo izici, lokhu Slots phezulu umdlalo kumane uswidi ukuze amehlo akho. Lona best nabanomusa slot ezinezihloko nge RTP ka 96.80%.